ကံဆိုးမ သွားရာ မိုးလိုက်လို့ ရွာ (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ကံဆိုးမ သွားရာ မိုးလိုက်လို့ ရွာ (၂)
ကံဆိုးမ သွားရာ မိုးလိုက်လို့ ရွာ (၂)
Posted by etone on Aug 30, 2011 in Health & Fitness, Parenting & Pregnancy, Short Story | 13 comments
မိဘအိမ်မှာ နေစဉ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် မယ်မယ်ရရ အလုပ်မလုပ်ခဲ့ဖူးသောကြောင့် ပိုက်ဆံရှာရန် ဈေးရောင်းခြင်း တမျိုးသာ လုပ်တတ်သည် ။ ဈေးသည် မျိုးရိုး မရှိသူမို့ ဈေးရောင်းရမှာ မ၀ံ့မရဲဖြစ်နေခဲ့သည် … သို့သော် …ငါ့ဝမ်းပူဆာ မနေသာ မို့လား ၊ ကလေးတွေမျက်နှာငယ်ရမည့် အဖြစ်မို့ သမ္မအာဇီဝ အလုပ်ဟုသာ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး ဈေးရောင်းခဲ့သည် ။ တတ်လို့ ရောင်းသည် မဟုတ်ပဲ ငတ်လို့ ရောင်းရသည့်အဖြစ်ကြောင့် ဈေးရောင်းကောင်းသော်လည်း အမြတ်စွန်း သိပ်မကျန်ခဲ့ပေ ။ တရိတ်ရိတ်တိုးတတ်လာသည့် အသုံးစရိတ်ကြောင့် ၀င်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ မမျှ ဖြစ်ကာ နွမ်းပါးသည်ထက် ပို နွမ်းပါးလာခဲ့သည် ။ ဒီအတိုင်း ဆက်သွားလျှင် ရှေ့လျှောက် ကျမတို့ မိသားစု ငတ်ပြတ်ကာ တောင်းစားရမယ့်ဘ၀ ရောက်လာတော့မည် ။ ကျမမှာ ကလေးတွေ ရှိသေးသည် … သူတောင်းစား မျိုးဆက်တော့ အဖြစ်မခံနိုင်ပါ ။ ယောကျာင်္းဖြစ်သူရှိရာ မြို့တက်ပြီး ရှာမှဖြစ်မည်ဟု စိတ်ကူးမိပြန်သည်… ။ ကလေးတွေကိုတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းခဏအပ်ထားမည်ဟု စိတ်ကူးမိသည် … ။ ဒီလို ညတွေတိုင်း တွေးရင်းမိုးလင်းသွားသည်က များသည် … ဒီညတော့ အိပ်ပျော်အောင် ကြိုးစား အိပ်ရမည် ….
” မေမေ … မေမေရေ… အန်တီဝေလာတယ် ထတော့ …..” သားငယ်လေးလာနှိုးသံကြားမှ မျက်စိဖွင့်ကြည့်မိတော့ နေတောင်မြင့်နေပါလား ။ ကျမဘယ်လိုအိပ်ပျော်သွားမှန်းတောင် မသိခင်ပဲ အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပြီး နိုးထလာတော့ ညည်းစိစိဖြစ်နေမိသည် ။ ခေါင်းထဲ မူးနောက်နောက်နဲ့ နေလို့လည်း မကောင်း …. ။ ဧည့်သည်လာသည်ဟု ဆိုသဖြင့် အိပ်ယာက ကုန်ကြုံး ထကာ ဆယ်ပေပတ်လည် အခန်းလေးကို အလျှင်စလို ရှင်းလိုက်သည် ပြီးနောက် ပေါက်ပြဲဖွာလန်ကြဲနေသော ဖျာလိတ်ကြီးကို ခင်းပေးရင်း ဗြုတ်စဗြဲလောင်း ဆံပဲတွေကို စုစည်းကာ ပွဲစား တဖြစ်လဲ ကုန်သည် မစန်းဝေ ကို ခရီးဦးကြိုပြုပါသည် ။ မစန်းဝေသည် ကျွန်မနှင့် ဆွေးမျိုးစပ်လျှင် တစ်ဝမ်းကွဲ အမတော်သူလည်းဖြစ်သည် ။
ဧည့်သည်ဖြစ်သူက ရောက်ရောက်ချင်းမှာပင် …. “မိချိုရယ် နင့်မှာလဲ ချို့တဲ့လှချည်လား ၊ ကလေးတွေကလည်း ပိန်လှီနေတာပဲ ဟယ် … ။ နင့်မိဘသိလျှင် ရင် ကျိုးရမှာဟဲ့ … မဖြစ်ပါဘူး ငါ မေမေပြုံးကို ပြောပြပြီး နင်တို့ကို ပြန်ခေါ်ဖို့ ပြောမှပါပဲ ”
” နေပါစေ မဝေရယ် ၊ ကိုယ့်မိုက်ပြစ်နဲ့ ကိုယ်မို့ ၊ မိဘမျက်နှာ ပြန်မကြည့်ရဲတော့ပါဘူး ၊ ဖြစ်သမျှ ကိုယ့်ကံလို့ပဲ မှတ်ယူထားပါတယ် ၊ မဝေ ကျမတို့ရွာဆီ လာလာလည်နေတာ ကျမ မိဘတွေကိုပြန်မပြောပါနဲ့နော်…. ၊ ကျမတို့ အဖြစ်သာ မြင်ကြည့် ကျမမိဘတွေ အဲ့ဒီနေရာမှာတင် သွေးတက်ပြီး သေလိမ့်မယ်…..”
” အေးပါဟယ် မပြောပါဘူး … ဒါနဲ့ ငါလာတဲ့ ကိစ္စက အကြောင်းထူးတယ်အေ့ … ။ ”
” တယ်ဟုတ်ပါလား ဘာထူးတာလဲ မဝေရဲ့ ပြောပါဦး ”
” ညည်းယောကျာင်္း သတင်းကြားလို့ လာပြောတာ … သူအလုပ်လုပ်တဲ့ ဆိုင်ရှင် အမျိုးသမီးက သူ့ကို နိုင်ငံခြားပို့ပေးလိုက်တယ်တယ်အေ … ဒီက သွားသွားချင်း တပတ်လောက်မှာတဲ့… အဲ့ဒါညည်း ၀မ်းသာအောင်လာပြောတာ ။ ”
” သြော် ဒါကြောင့် သူနဲ့ အဆက်သွယ် ပြတ်နေတာကိုး … အဆင်ပြေလျှင်တော့ ကောင်းပေမဲ့ … အခုထိ အဆက်သွယ်မရ ၊ ငွေလည်း မပို့တော့ ကျမတို့သားမိတွေ အတော်လေး ကြပ်တည်းလာတယ် မဝေရေ … ။ ကျွန်မလည်း ရောင်းဝယ်လုပ်တာ အဆင်မပြေပါဘူး ။ မြို့မှာ အလုပ်လေးဘာလေး တက်လုပ်လျှင်ကောင်းမလားလို့ … မဝေ အသိရှိလျှင် ဆက်ပေးပါဦးနော် … ။ အိမ်ဖော်အလုပ်လေး ဖြစ်ဖြစ် ၊ သန့်ရှင်းရေးဖြစ်ဖြစ် ရလည်း လုပ်ပါ့မယ် … ”
“အေးပါ ငါအလုပ်ရှင်တွေနဲ့ ညှိပြီးလျှင် ညည်းကို ပြန်လာခေါ်မယ် … ကဲကဲ ငါပြန်လိုက်ဦးမယ် အလုပ်ရှင်တွေနဲ့ ချိန်းပြီးမှ လာမယ့် စနေနေ့ကျ တခေါက်ပြန်လာခဲ့ဦးမယ် … ညည်း အဆင်သင့်ပြင်ထားနော်… ”
“ဒါနဲ့ မဝေရေ ကျွန်မမှာက ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ အလုပ်အကိုင် ရနိုင်ပါ့မလား … ။ ”
“ညည်းကလည်း အေ … မွေးမနေနဲ့ တော့ ငါ့တာဝန်သာ ထား … နောက်နေ့မှ ပြန်လာတော့မယ် အဆင်သင့်ပြင်ထားနော် … ”
ဘု ဘု ဘောက်ဘောက်နှင့်ပြောချင်တာပြောပြီး ထွက်သွားသော မဝေကို ကြည့်ကာ ကျွန်မရင်မောရသည် … ။ “သူ့စကားထဲ မွေးမနေနဲ့တော့ဆိုပါလား … ဘာကို ရည်ညွှန်းပါလိမ့် … ။ ” ယောကျာ်း မြို့ မှ ခဏပြန်လာစဉ် မိချိုတယောက် သားဆက်ခြားရေး ဗဟုသုတမရှိသောကြောင့် ဒီကိုယ်ဝန်ကို ထပ်လွယ်ထားရခြင်းဖြစ်သော်လည်း … ကြပ်တည်းနေသော အချိန်တွင် မလိုချင်မိတာတော့ အမှန်ပင် … ။
ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် မဝေပြန်သွားသည် … သူမ နောက်ကျောပြင်ကို ငေးရင်း ကျမသက်ပြင်းရှည် တချက်ချမိသည် ….။ ကျမကလေးတွေကို မိဘအိမ်ပြန်ပို့ဖို့ကလည်း ကိုယ့်မာနနဲ့ ကိုယ်မို့ … ကလေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးသည် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် နေစေခြင်းပင်ဖြစ်သည် ။ ဆရာတော်ကိုတော့ သေချာ အပ်ထားခဲ့ရမည် … ကလေးတွေ ရှေ့ရေးအတွက် မိဘတစ်ယောက်အနေဖြင့် လုပ်ပေးသင့်တာ လုပ်ပေးရတော့မည် … ။
အိပ်နေသော မောင်လေးနှင့် အထုတ်ပြင်နေသော မေမေ့ကို ကြည့်ကာ ကျမရင်ထဲ ၀မ်းနည်းစို့နင့်လာသည် ။ ကျမတို့ဧ။် ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာလေး အဖေ မြို့တက် အလုပ်သွားလုပ်ကတည်းက တစစအေးစက်လာခဲ့သည် ။ ၀င်ငွေနဲ့ ထွက်ငွေမမျှတပဲ ချို့တဲ့လာတဲ့ ကျွန်မတို့ မိသားစု စီးပွားရေး အခြေနေ ကြောင့် ယခုလည်း ကျမအမေ မြို့တက် အလုပ်လုပ်ဦးမည် …. ဘယ်တော့ ပြန်လာမယ်မှန်းမသိ …. အဖေ့လိုမျိုး ကိုယ်လွတ်ရုန်းကာ ပစ်ထားခဲ့ဦးမည်လား မတွေးတတ်တော့ပေ… ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အမေအလုပ်သွားလုပ်နေစဉ်အတွင်း ကျမသည် မောင်လေး နှင့် ညီမလေးကို သွန်သင်စောင့်ရှောက်မည်ဟုပင် ခံယူထားသည်… ။
” ကလေးတွေကတော့ ကျွန်မလို နားလည်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ … ကျွန်မကပဲ အမကြီး အမိရာ ဆိုသလို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က စောင့်ရှောက်ပေးရမှာပေါ့ … ။ အဖေရယ် ၊ အမေရယ်ပြီးလျှင် သွေးသားဆိုလို့ ကျွန်မတို့ မောင်နှမပဲ ရှိတော့တာ … ။ မောင်လေး ၊ ညီမလေးတွေကို အကောင်းဆုံး ပြုပြင် ထိန်းကျောင်းပေးရမယ် .. ။ ကျွန်မ ဘ၀ကြီး ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပါ … မောင်လေးနဲ့ ညီမလေးတွေ အတွက် မိဘနေရာကနေ ထိန်းကျောင်းပေးမယ်လေ … ဒါကျွန်မစိတ်ကူးပါ .. ။ ”
” ဟဲ့ သမီး … ဘာတွေ တွေးနေတာလဲ အမေပြောတာကြားလား … ” ငေးငိုင်နေသော သမီးဖြစ်သူကို မိချို လှမ်းပြောလိုက်သည် … ။
” ရှင် … မေမေ ဘာပြောတာလဲ … သမီး အတွေးလွန်သွားလို့ … ။ ”
” အင်း … ညည်းကတော့ ဖြစ်ရမယ် … အငယ်တွေကို ဦးဆောင်ဖို့ ညည်းမှာ တာဝန်ရှိတယ်နော် ဒီလို ငေး ငေးငိုင်ငိုင် ဖြစ်မနေနဲ့ … ”
” ဟုတ် .. ဟုတ်ကဲ့ အမေ ၊ စိတ်ချပါ သမီး အမွှာ နှစ်ယောက်ကို သေချာ ပြုစု စောင့်ရှောက်မှာပါ … ဒါနဲ့ အမေ ခုဏက ဘာပြောတာလဲ ပြန်ပြောပါဦးနော် … ”
” ဒီလို သမီးရေ … အမေ နဲ့ အဖေ မရှိခင် စပ်ကြား သမီးတို့ကို ဘုန်းကြီး ကျောင်းမှာ ခဏ အပ်ထားခဲ့ရမယ် …. ဝေယျာဝစ္စ ၀ိုင်ကူလုပ်ရင်း နေပေါ့သမီးရယ် … ကလေးတွေကိုလည်း လိမ္မာရေးခြား ရှိအောင် သွန်သင်ရမယ်ကြားလား …. ကဲ ရော့ရော့ … ဒီဟာက အမေ ခြစ်ကုတ်စုထားရတာ … မများပေမဲ့ သမီးတို့ အသုံးလိုတဲ့အခါ ၊ နာမကျန်းဖြစ်တဲ့ အခါ သုံးလျှင် သုံးလို့ ရအောင် ယူထား … ”
“ဟုတ် … ဟုတ်ကဲ့ မေမေ … ဒါနဲ့ အမေ့ ကိုယ်ဝန် ကိစ္စကရော … ”
” မဝေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး တစ်ခုခု စဉ်းစားတာပေါ့ …. ဒါ မခက်ခဲပါဘူး အေ …. ညည်းမမွေးခင် တယောက်တုန်းကလည်း အမေတို့ ငြားခါစမို့ …. မရပ်တည်နိုင်သေးခင် ဒီလိုပဲ ဖြေရှင်းလိုက်ရတယ် …. ”
“အင်း ဟုတ်ပါပြီ မေမေ ကြည့်စီစဉ် နိုင်တယ်ဆို သမီး စိတ်မပူတော့ပါဘူး …. ”
စန္ဒာတစ်ယောက် လေးတွဲသော မျက်လုံးအစုံဖြင့် …. မိမိဧ။် မောင်လေးလား ၊ ညီမလေးလား မသိခင် … ဆုံးရှုံးရတော့မည့် မေမေ့ဝမ်းထဲမှ ကိုယ်ဝန်ကို ကြည့်ကာ သက်ပြင်းချမိသည်… ။
မမအိတုံရေ—တကယ်ကိုဝမ်းစရာပါ။ခုလိုဆင်းရဲ ချို့ တဲ့မှု၊အသိပညာမဲ့ခဲ့တာတွေကြောင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့ ဝမ်းနည်းစာတပုံတပင်ကြီးနဲ့ ဝေးပါစေလို့ လူသားအားလုံးအတွက်ဆုတောင်းပေးပါတယ်
ဒါမျိုးတွေ လည်း ရှိတယ် ပေါ့ နော် မအီးတုံး
မြန်မာနိုင်ငံအနေ နဲ့ 
ပြည်သူများအတွက် ကျန်းမာရေး အသုံးစရိတ် သုံးစွဲခြင်း ကဏ္ဍ ကို
အမြန်ဆုံး တိုးချဲ့ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ပါစေ လို့ 
etone ရေ ဇာတ်လမ်းရော အရေးအသားပါ ကောင်းလို့ ပိုစ့် တစ်ပုဒ်လုံးပြီးလို့ပြီးသွားမှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး
နောက်ထပ်ဆက်ရန် ၇ှိဦးမယ်ထင်တယ် အားပေးနေမယ်နော် …
ဆက်ရန်ရှိသေးရင် ထပ်တင်ပေးပါဦးနော် အားပေးမျော်လင့်နေပါ့မယ်
တနေ့တခြား အရေးအသားတွေ အရောက်လက်လက်လာတယ်။
အားပေးနေတယ် ညလေးတုံး.. ကြိုးစား..
ဟီးဟီး … မမှီရေ နည်းနည်းတော့ စောင့်ပါဦး … ။
ဒီဇာတ်လမ်းက အစဆုံး ရေးပြီးသွားတာ ကြာပါပြီ … အကုန်လုံးတင်လိုက်လျှင် မျက်စိညောင်းမှာ စိုးတာရယ် …သဂျီးက တနေ့ နှစ်ပုဒ်ပဲ ဆိုလို့ … တနေ့ တလံ ပုဂံဘယ်ရွှေ့မလဲပေါ့နော် ဟိဟိ
အန်တီဝေဆိုတဲ့ အဒေါ်ကြီးက တော်တော်ဆိုးတာပဲ။ ဒါနဲ့ ကျနော်တို့ အန်တီဝေများလား။ ဟင်း..ပါးစပ်ပြောတော့ ဘုရားဘုရား၊ လက်ကြတော့ ကားရားကားရားနဲ့ :mad:
အဲဒါ ဒေါ်စန်းဝေ.. ဝေချင်းသာ တူချင်တူမယ်..
ဝေပုံ ဝေ နည်း မတူဘူး..
နာတို့ အန်တီဝေက မုန့်ဝေထားတယ်.. ဒါကြောင့် မုန့် မျက်နှာနဲ့ ဘယ်သူမှမထိနဲ့ မီးပွင့်သွားမယ် ဘာမှတ်လဲ..
ဟားဟားဟား … ရီရတယ် ….
အဘနီကပြောထားတယ်လေ … နံမည်တူတာ အရေးမကြီးဘူးတဲ့ အကြောင်းအရာမတူရင် ပြီးရောတဲ့ ..
ဒါနဲ့စကားမစပ် wei က ဝေ မဟုတ်ဘူး …
မဝေလားဆိုတော့ .. မဝေမဟုတ်ဘူး မ၀ိပါတဲ့ .. အခုမှ သတိရတော့တယ်
၀ိဆိုတော့ မဆိုးဘူး … ၀ ရှိမှ ၀ိလုပ်လို့ရတာလေ …